धर्म सस्किर्ती – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती
4 days ago धर्म सस्किर्ती 0
आज मिति २०७८ साल असार २ गते बुधबार। तदअनुसार सन् २०२१ जुन १६ तारिख । ज्येष्ठ शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि । आज केही राशिको भाग्य चम्किदैछ भने केही राशि सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। आज आकस्मिक धन लाभ हुने यी राशिको भाग्य हेर्नुहोस्ः नयाँ कामको थालानी या योजना बन्ने । दाम, इनाम र …
6 days ago धर्म सस्किर्ती 0
काठमाडौँ । ज्योतिषी भाषाअनुसार भन्ने हो भने तपाईहाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ। तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ। आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं। तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन। कुनै …
काठमाडौँ । सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन । हो, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र …
1 week ago धर्म सस्किर्ती 0
यस वर्षको पहिलो सूर्यग्रहण बिहीबार, जून १० मा भइरहेको छ । हिन्दू क्यालेन्डरका अनुसार यो सूर्य ग्रहण ब्रुषभ र मृगशीरा नक्षत्रहरूमा जयेश औशी तिथिमा छ । नेपाली समय अनुसार ग्रहण दिउँसो १ बजेर ५७ मिनेटदेखि सुरु हुनेछ र साँझ ६ बजेर ५६ मिनेट सम्म चल्नेछ । तपाईं नेपाल तथा भारतमा …
2 weeks ago धर्म सस्किर्ती 0
मेष– चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : स्वास्थ्य स्थिती ठीक हुनेछ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू प्रति तपाईंको हावी मनोवृत्तिले मात्र अनावश्यक तर्क सुरु हुनेछ र दोषारोपण ल्याउन सक्छ। तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन् ( पुर्याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले तपाईंलाई …
अलि–अलि त जो पनि अल्छी त हुन्छौँ तर संसारमा यस्ता धेरै मानिस हुन्छन् जो अल्छीकाे पनि बाउ हुन्छन् । यिनीहरू यति आलसी हुन्छन् कि आफ्नो लाभको लागि पनि कुनै कार्य गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर सोच्छन् । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार ५ राशि यस्ता छन् । जुन राशिका मानिस महाअल्छी हुन्छन् । यस …
यी विरुवा घरमा लगाउनुहाेस् चुम्बक जसरी पैसा तान्नेछ, चम्कनेछ भाग्य
शास्त्रका अनुसार त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग जोडिएको छ जुन विरुवा घरमा रोप्दा पैसा चुम्बक जसरी तान्ने विश्वास गरिन्छ । आज हामी ती विरुवाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जसलाई भाग्य सुचक मानिन्छ अर्थात धन आर्जन गर्ने गर्छ । मनी प्लान्टका बोटहरू लामो समयदेखि सबैका लागि मनपर्दो बोटका रूपमा …
लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पुजा यसरी गर्नुहोस्, हुनेछ तत्काल धनला भ !
शुक्रवार लक्ष्मीको विशेष दिन हो । लक्ष्मी धनकी देवी हुन् । त्यसैले धन प्राप्त गर्न चाहनेले लक्ष्मीको आराधना गर्नुपर्ने धार्मीक विश्वास छ । आज शुक्रबार हिन्दूधर्मावलम्बीले सन्तोषी माता र वैभव लक्ष्मीको उपासना गर्ने धार्मीक प्रचलन छ । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजाआ राधना गरे घरमा धनका साथै समृद्धि …
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । कला कौशलका क्षेत्रमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ । साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । नयाँ कार्यको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ …
ग्रहचक्रमा मंगलको उथलपुथल, यी ४ राशिलाई लाभै-लाभ !
एजेन्सी – मंगल ग्रहले बुधबार बिहान राशि परिवर्तन गरेको छ। बुधबार बिहान ७ बजेर ४ मिनेटमा मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन गरेको हो। त्यस समयपश्चात मंगल ग्रह मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेको छ। मंगलको राशि परिवर्तनले सम्पूर्ण राशिमा प्रभाव पार्नेछ। मंगलका कारण अब निम्न केहि राशिहरुलाई लाभै-लाभ हुनेछ। मंगल कर्कट …